Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay dhaxal-sugaha Boqortooyada Sucuudiga - Halbeeg News
RIYAADH(HALBEEG)-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya , Mudane Xasan Cali Khaye, oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Sucuudiga ayaa la kulmay dhaxal-sugaha Boqortooyada Sucuudi Carabiya, Mohammed bin Salman bin Cabdulaziz.
Kulanka oo ka dhacay qasriga Boqortooyada ayey ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhaxal-suge Mohammed bin Salman bin Cabdulaziz uga wada hadleen danaha labada dal.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa Boqortooyada uga mahadceliyay soo dhawaynta ballaaran ee loo sameeyay wafdiga uu hoggaaminayo iyo isgarab istaagga Sucuudiga ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed.
Dhaxal-sugaha Boqortooyada Mohammed bin Salman bin Cabdulaziz ayaa dhankiisa bogaadiyay horumarka ay Soomaaliya ka gaartay maamul wanaagga, Siyaasadda, dhaqaaalaha iyo amniga, waxa uuna ballan qaaday in Sucuudigu ay sii wadayaan taageerrida dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa shalay qasriga boqortooyada kula kulmay boqorka dalka Sucuudiga, Boqor Salman bin Cabdulaziz Al Saud oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Sucuudiga, iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya oo ka qeybgelay shirweynaha Afrika iyo Turkiga